Ungawulawula njani uMgangatho weNkampani yethu | JIAWEI
Kukho abavelisi bezityalo abangamakhoboka ngakumbi nangakumbi kwimarike.Ngoko ke, kufuneka iimfuno zomgangatho ongqongqo ukuze zibonakale kubakhiqizi abaninzi. Ngoku masazise malunga nolawulo lomgangatho kwinkampani yethu:
Okokuqala: Izinto ezikhethiweyo ezikhethiweyo: amasuntswana eplastiki
(1) Zonke izixhobo zokungenisa izinto ezintsha ze-PE zingenise ama-80% + izixhobo zokubuyisa zenqanaba lokuqala iipesenti ezili-10% zisetyenziselwa ukuguqulwa kobumbano ukwandisa ukukhawuleza kombala, ubukhuni kunye nokuthintela ukuqhekeza.
(2) Izinto ezingafunekiyo zeemveliso ze-PEVA ziqinisekisa i-EVA50% kunye ne-PE50%, ukuqinisekisa ukuthamba kunye nokulinganiswa kwamagqabi, kwaye ubukhulu bungaphezulu kwe-10% yeemveliso jikelele kwimarike ukuqinisekisa ukuziva.
(3) Incamatheliso esekwe kumanzi ngokusingqongileyo isetyenziselwa inkqubo yoshicilelo lwamagqabi, kwaye umbala ongenisiweyo usetyenziselwa umbala ukuqinisekisa inqanaba eliphezulu lokulinganisa umbala kunye notshintsho lombala.
(4) A + C yomeleza umgangatho okhethekileyo webhokisi yezorhwebo yangaphandle isetyenziselwa ukupakisha ibhokisi.
(5) Izinto zokwenziwa kweenkuni zokwenyani ezifana nezibonda zeenkuni kunye neepali zoqalo zonke zenziwe ngomthi owomeleleyo kunye nezinto zetyiwa zenyama, zithengiwe kwaye zibekwe ngaphambili, zomile okwemvelo kangangeenyanga ezi-3-6 emva koko zomiswe kubushushu obuphakathi beentsuku ezingama-7-10. Emva kokuba imbiza igqityiwe, yome kangangeentsuku ezingama-5-7 ukuqinisekisa ukuba ayisiqhekeki, iimpethu, isikhuxu okanye umswakama.
Okwesibini: Izixhobo ezitsha: Ukuza kuthi ga ngoku, ama-70% ezixhobo aphuculwe.
(6) Iiseti ezimbini zezixhobo zokushicilela ezizezomatshini ezizezinye ezizicombululela ukusombulula ngokufanelekileyo iingxaki zemveliso kunye nolwahluko wombala.
(7) Isixa esikhulu seenaliti zesikere sisetyenziselwa ubume bethambo kunye nezigqabi ukuqinisekisa ukuba iziqu kunye namagqabi aziqhekezwa kwaye zaphukile.
(8) Inkampani ityale imali ephantse ibe ngama-500,000 ukuze iseke isixhobo sonyango sokuphelisa igesi ukuqinisekisa ukuba yonke inkqubo yokuvelisa iyahambelana neemfuno zokhuseleko lokusingqongileyo kuzwelonke.
Isithathu. Inkqubo yokuvelisa:
(9) Iipesenti ezingama-80 zabasebenzi abadlala ngaphambili bangaphezulu kweminyaka emithathu ubudala. Ubungcali kunye nokusebenza kakuhle kwabasebenzi bakudala kuqinisekisa ukuba iimveliso ziqinisekisiwe ukusuka ekuqaleni kwemveliso.
(10) Ingxaki yobume bezityalo, abathengi abaninzi bacinga ukuba iimpahla azilunganga, kuba umthi awuzimiswanga ngobugcisa emva kokugqitywa kwenkqubo. Isibonda sokwenene soqalo lwenqanawa kunye neemveliso zenqanawa yokwenene, sifaka amagqabi emthini emva kokutyala iimbiza esizigcina iimveliso zigcwele kwaye zintle. Akukho sidingo sokuba abathengi baphinde bavule imilo yegqabi, ukunqanda ukukhalaza kwabathengi abangajongeki kakuhle ngexesha lenkqubo yentengiso.